Ziseqhulwini ezokuthuthukisa umphakathi | IOL Isolezwe
Ziseqhulwini ezokuthuthukisa umphakathi
Isolezwe / 28 February 2013, 10:57am / MHLENGI SHANGASE
IZINDLU, ezemfundo, ezempilo, izimpesheni, ukuthuthukiswa komphakathi,ziqhubekile nokuba seqhulwini zezinhlelo zikahulumeni kuleli zokuthuthukisa impilo yabantu.
Izolo uNgqongqoshe weziMali uMnuz Pravin Gordhan (osesithombeni), ethula isabelo-mali sika-R1.15 trillion salo nyaka wezimali ePhalamende, eKapa, uthe lezi zinto zabelwe u-60 % wale mali ekhishiwe. Ezemfundo njengoba bekulindelekile zithole isabelo esikhulu nakulo nyaka wezimali njengoba zabelwe u-R233 billion.
Abantu abangenazo izindlu, abahlala emijondolo bazolala behleka njengoba kuzokwakhiwa izindlu ezingaphezulu kuka-400 000 ngo-2016.
UGordhan uthe kuzofakwa imali komasipala ukuze kwengezwe izindlu ezingu-409 143 bese kuvuselelwa ezingu-198 000.
“Kuhamba kancane ukwakhiwa kwezindlu zomxhaso kunalokho ebesikuhlelile. Kusuka ngo-1994 kuze kube unyaka odlule uhulumeni usakhe izindlu ezingu-2.7 million emindenini ehola kancane. Kulo nyaka wezimali isabelo sezindlu singu-R31.9 billion,” usho kanje.
Uthe nalabo abahola kusuka ku-R1 500 kuya ku- R7 500 ngenyanga bazohlomula ohlelweni lwezindlu njengoba bakha izindlu ezibalelwa ku-6 000 abazokwazi ukuziqasha.
Uhlelo lokufakwa kukagesi aluzange lusale ngaphandle enkulumeni kaGordhan. Eminyakeni emithathu kubekwe u-R5.7 billion.
Izaguga, ebezilinde ukwazi ukuthi uzothi phohlo malini empeshenini yazo zizohleka kuvele elomhlathi, imali inyuka ngo-R60. Izaguga sezizohola u-R1 260 zisuka ku-R1 200.
Imali yesondlo sabantwana edume ngeleqolo izonyuka kabili kulo nyaka, kuzothi fahla ngo-R10 ngo-Ephreli iphinde ithasiselwe ngomunye u-R10 ngo-Okthoba okusho ukuthi abantwana bazogcina sebehola u-R300 ekupheleni konyaka.
Imali yezintandane izonyuka ngo-R30, ibe ngu-R800 ngenyanga kusuka ngo-Ephreli. Amasosha, abakhubazekile nabo imali yabo izonyuka ngo-R60, ibe ngu-R1 260.
UGordhan uthe bayayisusa yonke imibandela ngo-2016 ebivimba ukuthi umuntu yize esefinyelele eminyakeni yokuthola impesheni kodwa angakwazi ukuyithola ngoba kubhekwa ukuthi uhola malini ngonyaka.
“Okwamanje kubhekwa ukuthi awuholi yini ngaphezulu kuka-R49 920 ngonyaka nanokuthi izinto onazo azifinyeleli ku-R831 600 uma ungashadile. Uma ushadile bekudingeka nithole imali engekho ngaphezulu kuka-R99 840 kodwa kusuka ngo-2016 wonke umuntu uma sekushaye isikhathi sakhe, uzoyithola imali yakhe kungabekwa mbandela,” kusho uGordhan.
Izibalo zentsha engasebenzi uthe ziyabakhathaza yingakho bezobeka ezithebeni zePhalamende umhlomulo wentsha engasebenzi.
Izindawo ezakhahlanyezwa yisiphepho okubalwa iKwaZulu-Natal, Limpopo, neMpumalanga nezikole ezigxile kakhulu ekukhiqizeni abafundi beMaths neSayensi ama-Dinaled, konke kuzofakelwa imali.
Kuzokwehla umthwalo kubasebenzi njengoba ingeke inyuke intela kulo nyaka. Kuno-R7 billion wokusiza ukuthi yaphulwe intela.
Izinkampani yezitimela, iPrasa , izothola u-R5 billion kuthi i-Sanral yona ithole u-R156 million ukuze kuthuthukiswe ezokuthutha.
Uhulumeni ufuna ukubuyisa umhlaba ongu-310 000 hectares ukuze ubuyiselwe kubantu.
Uthe: “Sifuna ukuthuthukisa amapulazi angu-368 ngonyaka ozayo siqeqeshe abalimi abangu-400. Kubekwe u-R3.4 billion kwezomhlaba.”